Izindaba - I-20'FCL NCL One Step Crystallizer neBellinwax zifike esitokweni samakhasimende ngaphambi kweholide le-Muharram Festival.
Ama-National Chemical Laboratories njengoba sazi i-NCL, kusukela ekuqaleni kwawo-1940 ngasekupheleni kwawo enza insipho kanye nama-shampoos ebhizinisi lobuhle be-salon, eya endimeni yobuholi namuhla embonini yezokugcinwa kwendle njengomhlinzeki ogcwele, onophawu lomhlaba wonke. I-NCL izinze ePhiladelphia, ePennsylvania, nesikhungo sokukhiqiza nokusebenza kwamamitha ayisikwele. Basebenzisa ophendulayo abakhulu, abanengcindezi enkulu ekukhiqizeni izinto zokusetshenziswa ezingathunjwa ezisetshenziswa emikhiqizweni yethu eminingi. Ngokuhlanganiswa okuhlanganisiwe kwamalitha angaphezu kwezigidi ezi-3 zempahla eluhlaza kanye nemikhiqizo eqediwe, indawo ye-NCL ingenye yezinhlobo zayo ezinkulu kunazo zonke e-United States. Ilabhorethri yabo esesizeni, enekhompyutha isetshenziswa ngamakhemikhali aziwa embonini, asiza ekwakheni ukwakheka kwemikhiqizo emisha futhi esezingeni eliphansi ngenkathi eqinisekisa ukuthi le mikhiqizo ihlangabezana nezindinganiso zethu eziqinile zokulawula ikhwalithi.
INational Chemical Laboratories uhla olubanzi lwezinhlelo zokuhlanza nokunakekela lunikeza ithuba lokuthola okukodwa kwazo zonke izidingo zakho zamakhemikhali ezindawo zokuhlanza. Noma ngabe kuphansi komhlaba okuqinile, itshe lemvelo noma ukunakekelwa kwamathayili e-ceramic, ukunakekelwa kukakhaphethi, izinhlelo zokuhlanza okuluhlaza, izindlu zangasese zangasese, ukunakekelwa kwezimboni, izitolo ezinkulu noma isevisi yokudla, kunohlelo lomkhiqizo lweNCL olwenzelwe ukukhulisa ukusebenza kahle kwabasebenzi nokulawula isabelomali sokuhlanza.
Uhlelo lokunakekelwa kwamatshe i-TM olusuka kulabhorethri kazwelonke yamakhemikhali ngumkhiqizo osudlule iminyaka eminingi ucwaningo lokulungiswa komhlaba kanye nokuthuthukiswa kwamakhemikhali. Kufaka phakathi: i-crystal spray kanye nenqubo yokupholisha - uhlelo olwenzelwe ukudala imabula ecwebezelayo, isicwebezelisi esilula nesiphakeme kakhulu sokugaya amatshe amatshe amatshe namatshe Amatshe wokupholisha inqubo yemabula - yenzelwe ukudala isicwebezelisi semabula, i-travertine, ukugaya umhlabathi kanye nelitje lekalika elithambile Uhlelo lokupholisha - uhlelo lokunikeza isicwebezelisi nokubuyiselwa okuphezulu kakhulu kuzo zonke izindawo ezenziwe ngotshani ezibunjiweImikhiqizo yokunakekelwa kwamathayili - inqubo ephelele yokugcinwa nokuvikelwa kwamathayili acwebezelisiwe nengaqediwe, amathayili ambiwe, amathayili e-saltillo, itshe laseMexico namanye amathayela wokufakelwa
Isikhathi Iposi: Jun-24-2020